Fiteny kôreanina - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Korean language)
Isan'ny mpiteny 82,5 tapitrisa
Faritany Korea Avaratra
Korea Atsimo Sina (ao Yanbian)
Sata Ofisialy ao Korea Avaratra sy Atsimo
Ny fiteny kôreanina dia fiteny tenenina any Kôrea ary eny amin' ny faritra moron-tsisintanin' ny Repoblika Entim-bahoakan' i Sina (Yanbian) ary amin' ny fikambanana kôreanina any ivelan-tanindrazany (Beijing, Shandong, Rosia, Aostralia, Etazonia, Frantsa, sns.). Io teny io no teny ofisialin' i Kôrea Avaratra sy Kôrea Atsimo.
Mbola iadian-kevitra ny fianankaviam-piteny misy ny fiteny kôreanina. Heverin' ireo mpahaitsikerafiteny fa fiteny manirery ny fiteny kôreanina, kanefa ny sasany dia mametraka azy ao amin' ny fianakaviam-piteny altaika. Nisy fitoviana vitsivitsy amin' ny fiteny japôney io fiteny io .
Ny fiteny koôreanina dia soratana amin' ny hangul; ampiasaina ihany koa ny hanja, amin' ny voambolana siantifika indrindra indrindra.
Soratra[hanova | hanova ny fango]
Lahatsoratra antsipirihany : Hangul.
Ny fiteny kôreanina dia nampiasa ny hanja (sinôgrama) izay mbola ampiasaina amin' ny fanoratana ny fiteny sinoa ao Sina na ny fiteny japôney ao Japana. Nanomboka tamin' ny taonjato fahaenina hatramin' ny taonjato faha-20 ny fiteny kôreanina no nampiasa io tarehin-soratra io. Tamin' ny taonjato faha-20 dia nosoloina ho hangul ny soratra ôfisialy. Ny hangul dia abidy noforonin' i Sejong Ilaibe tamin' ny taonjato faha-15, ary noraràna nanomboka tamin' ny taona 1504 hatramin' ny 1894 ny hangul ary nampiasaina ho abidy ôfisialy nanomboka tamin' ny 1945. Na dia vitsy ankehitriny ireo olona mahafehy tsara ny hanja, mbola ampiasaina ihany io soratra io amin' ny fianarana ambony amin' ny voambolana siantifika ary ireo voambolana mikasika ny filôzôfia sinoa.
Ny hangul dia ahitana litera 24 (renifeo 14 ary zanapeo 10). Soratana amin' ny alalan' ny fanavondronana litera araka ny vaninteny ny hangul. Mitovitovy endrika amin' ny fipetraky ny lela am-panononana ny renifeo ny endriky ny litera. Ny zanapeo dia manana ny eva taôista (teboka na tsipika fohy, tsipika mitsangana ary tsipika mitsivalana, izay midika "Masoandro", "olona" ary "Tany").
Soratana miaraka amin' ny elanelana ny teny kôreanina ankehitriny tsy ohatr' ireo fiteny sinoa na japôney. Mampiasa mari-tsoratra tandrefana ny kôreanina.
↑ Martin 1966, 1990. Miller 1971, 1996
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_kôreanina&oldid=1002039"
Voaova farany tamin'ny 8 Martsa 2021 amin'ny 07:37 ity pejy ity.